Amin'ny lisansa sy fahasimbana amin'ny loharano misokatra | Avy amin'ny Linux
Vao haingana aho no nanao lahatsoratra tamin'ny forum momba ity sary asehoko anao ity
Mikasika ny rindrambaiko maimaimpoana sy rindrambaiko manana, tsy voatery tsy misy antony izy. Fa ny fahitany loharano misokatra toa ahy (raha ny fahitako azy) tafahoatra. Voalohany dia hataoko lisitra ireo masonkarena tokony hananana fahazoan-dàlana heverina ho loharano misokatra:
1) Tsy tokony hamerana ny hoe na iza na iza afaka mivarotra na manome ilay rindrambaiko, na mila mitaky fanangonana andriana raha mivarotra azy io.
2) Ny programa dia tsy maintsy ampidirina ny kaody loharano ary avelao ny fizarana azy ireo amin'ny lohan-kevitra roa sy ny kaody natambatra (amin'ny tranga farany, tsy maintsy misy ny fomba hidirana amin'ilay kaody ary tsy mihoatra ny sarany azo averina).
3) Tsy maintsy mamela ny fanovana sy ny asa derivative ianao ary mamela azy ireo hozaraina amin'ny fe-potoana mitovy amin'ny lisansa voalohany.
4) Tsy maintsy mamela mivantana ny fizarana rindrambaiko vita amin'ny kaody novaina. Azonao atao ny mametra ny fizarana toy izany IRERY raha mamela ny fizarana patch miaraka amin'ny kaody ny fahazoan-dàlana ho an'ny fanovana ny programa amin'ny fotoana fanangonana. Mety hitaky ny ananan'ilay rindrambaiko nanjary anarana na kinova hafa noho ny voalohany.
5) Aza manavakavaka olona na vondron'olona.
6) Tsy tokony hamepetra olona tsy hampiasa ny rindrambaiko amin'ny sehatry ny asa ianao.
7) Ny zon'ny rindrambaiko manana fahazoan-dàlana dia tokony hihatra amin'ireo rehetra mizara izany aminao fa tsy mila fahazoan-dàlana fanampiny.
8) Ny fahazoan-dàlana dia tsy tokony ho manokana amin'ny vokatra iray.
9) Ny fahazoan-dàlana dia tsy tokony mametra rindrambaiko hafa zaraina miaraka amin'ireo rindrambaiko manana fahazoan-dàlana.
10) Ny fahazoan-dàlana dia tsy maintsy miandany amin'ny teknolojia.
1) Ny fandrarana ny fampiasana ara-barotra ny loharano misokatra dia a baolina tanteraka, noho ny fepetra 1.
2) Idem noho ny tsy fahampian'ny fiantohana ny fanovana ny kaody, noho ny criterion 3
3) Ditto ho an'ny "indraindray ihany" amin'ny fizarana ny lozisialy tany am-boalohany, noho ny fepetra 1, 2, 5, 6 ary 7
4) Momba ny tsy fahampian'ny antoka hizarana ireo fanovana dia rehefa eo ny fahazoan-dàlana tsy copyleft io, tsy hoe satria loharano misokatra.
5) Mihoatra ny fampitahana eo amin'ny lozisialy malalaka sy loharano misokatra, izy io fampitahana eo amin'ny GPL sy ny fahazoan-dàlana tsy copyleft hafa.
Tsarovy tsara ny mpamaky: Ny mahasamihafa ny rindrambaiko maimaim-poana sy ny loharano misokatra dia ny fomba fijery. Ny voalohany manakaiky ny zava-drehetra amin'ny fomba fijery ny Libertad, ny hafa kosa miatrika azy amin'ny fomba fijery ara-teknika.
Ary satria izahay dia, hametraka lahatsoratra iray hafa eto aho fa momba izany fahazoan-dalana. Efa hitantsika ny fepetra takiana amin'ny fahazoan-dàlana open source. Tsy lazaina intsony fa mitaky an'izany ny lisansa rindrambaiko maimaimpoana fenoy ny fahalalahana 4. Matetika ny lisansa rindrambaiko maimaimpoana dia loharano misokatra ihany koa ny mifamadika amin'izany. Ary toy izany koa ny mifamadika, raha tsy maimaim-poana dia tsy loharanom-baovao misokatra sy ny mifamadika amin'izany. Misy maningana amin'ny fitsipika ary toy izao manaraka izao:
1) Ny 4-andalana BSD (fantatra koa amin'ny anarana hoe BSD voalohany). Tsy loharanom-baovao misokatra izy io satria iray amin'ireo andininy ireo nametraka doka ho an'ny fikambanana nanoratra kaody (mandika ny fepetra 8, ankoatry ny mifanentana amin'ny GPL). Ny BSD fehezan-dalàna 2 sy 3 dia loharano malalaka sy malalaka, ary samy mifanaraka amin'ny GPL.
2) La CECILL (CEA CNRS INRIA Free Logiciel) Maimaimpoana ary natao ho mifanaraka amin'ny GPLv2 fa mifototra amin'ny lalàna frantsay.
3) Ny fahazoan-dàlan'ny Cryptix (ampiasaina amin'ny tetikasa cryptix, fantatra amin'ny fanitarana kriptografia Java). Io ilay 2-andininy BSD, fa manokana ho an'ny vokatra.
4) Ataovy izay fanao tianao Lisansa ampahibemaso (Ny fahazoan-dàlan'ny hanao izay tianao amin'ny kaodiko. Tsy mila fanazavana misimisy kokoa izany) Ny antony tsy nametrahan'izy ireo izany dia misokatra, satria hoy i Martin Michlmayr (izay nandinika ny andalana tokana amin'ilay fahazoan-dàlana) any Eropa dia tsy misy Public Domain. Raha ny fanazavana, i Sam Hocevar, izay namorona ny tetikasa Debian teo anelanelan'ny 2007-08, no namorona azy.
5) Ny fahazoan-dàlana Netscape. Fahazoan-dàlana tsy mampihomehy izay ampirisihan'ny FSF tsy hampiasainao TSY, nataon'i FANAVAKAVAHANA izay mandeha amin'ny mpampiasa. Izany no mahasamihafa indrindra ny fahazoan-dàlana sy ny lisansa Mozilla (izay loharano misokatra sy maimaim-poana).
6) Ny fahazoan-dàlana OpenSSL. Anisan'izany ny a fehezan-dàlana, indrindra satria mifototra amin'ny lisansa Apache version 1.0 (tsy misokatra) fa tsy 2.0 (misokatra).
7) Ny fahazoan-dàlana XFree86. Mitovy amin'ny andalana 4 BSD.
8) Ny Fahazoan-dàlana ampahibemaso. Tsy toy ireo efa voatanisa ireo, fahazoan-dàlana open source fa tsy maimaim-poana. Toy ny GPL izany manery mamoaka izay fanovana nataon'ny orinasa, na dia mitokana aza ity iray ity.
Ankehitriny, misy ihany koa ny fanontaniana hafa momba ny fahazoan-dàlana malalaka sy loharano misokatra, toy ny mifanentana amin'ny GPL, raha copyleft na tsia, na raha nankatoavin'ny torolàlana ankapobeny an'ny Debian. Fahazoan-dàlana malalaka sy malalaka izay tsy mifanaraka amin'ny GPL dia ny Eclipse, Mozilla (kinova alohan'ny 2.0), Apache (mitovy amin'ny Mozilla), IBM, LaTeX, PHP ary Sun ankoatry ny hafa. Fahazoan-dàlana malalaka sy malalaka izay tsy copyleft dia BSD, MIT, Python, PHP ary Apache ary Artistic ankoatry ny hafa. Ary amin'ny tsipika ankapobeny an'ny Debian, dia lavin'izy ireo ny Lisansa GNU Free Documentation raha toa ka misy fizarana tsy miovaova ao anatin'ilay rakitra.
Azontsika atao koa ny miresaka momba ny fameperana hafa avela ao anaty rindrambaiko maimaimpoana, toy ny hatraiza ny tanjaky ny copyleft. La LGPL (Copyleft malemy) dia namboarina mba hahafahan'ny modules izay ao anatin'ny programa GPL (copyleft mahery), hampiasaina amin'ny programa tsy GPL (LibreOffice dia nahazo alalana tamin'ny LGPL).
Fepetra hafa dia ny an'ny valifaty patanty, izany hoe mifarana ny zonao amin'ny maha mpampiasa anao programa iray rehefa mandeha any amin'ny fitsarana ianao manohitra ilay orinasa namorona ny rindrambaiko ho an'ny olana momba ny patanty. Vinavina ny lisansa malalaka sy loharano malalaka misy an'io fepetra io, ankoatry ny fahazoan-dàlana Mozilla sy Apache.
Eo ihany koa ny momba ny fahazoan-dàlana mihevitra fameperana fitaovana (toy ny tivoisation). Ny kinova 3.0 an'ny GPL dia noforonina mba hiadiana amin'ny tivoisation, satria mampiasa rindrambaiko maimaimpoana ho an'ny masininy i TiVo, mizara ny kaody ambanin'ny GPLv2, saingy tsy mamela ny fehezan-dalàna novaina, raha tsy nahazo alalana tamin'ny alàlan'ny sonia nomerika an'ny orinasa (zavatra mitovy mitranga amin'ny Secure Boot). Linus dia tsy mifanaraka amin'ny kinova 3, voalohany satria heveriny fa ny lisansa rindrambaiko dia tsy tokony hitarina amin'ny fitaovana ary faharoa satria izy manokana dia mihevitra ny sonia niomerika ho fitaovana fiarovana mahasoa.
Ary reraky ny manoratra aho. Manantena aho fa ity lahatsoratra ity dia ilaina amin'ny nano amin'ny fampisehoana Linux For Dummies. Ho an'ny manaraka dia manao iray amin'ny fomba fanaovana varotra rindrambaiko maimaimpoana aho.
Famaritana ny loharano misokatra: http://opensource.org/osd
Maninona ny OSI no tsy manaiky ny Ataovy izay fanao tianao Lisansa ampahibemaso: http://opensource.org/minutes20090304
RMS mandray ny lisansa Netscape: http://www.gnu.org/philosophy/netscape-npl.es.html
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Amin'ny fahazoan-dàlana sy fahavoazana amin'ny loharano misokatra
Avy taiza io tabilao io? Fanodinkodinana zava-misy lehibe tokoa ny fanaovana ny teny hoe "Free Software" ho lehilahy tsara amin'ny sarimihetsika. Ny GPL dia fahazoan-dàlana "Open Source", ka tsy misy dikany ny fampitahana mahaliana toy izany.
"Ny GPL dia fahazoan-dàlana" Open Source ", ka tsy misy dikany ny fampitahana mahaliana."
Aha ... mijery anao ...
GPL dia lisansa FSF ho an'ny SOFTWARE MAIMAIMPOANA.
Ny rindrambaiko maimaimpoana dia mikendry ny hiaro ny fampandrosoana ny lozisialy ary hamoha sy hizarana azy satria manana sehatra ara-tsosialy, filozofia ary raha tianao ny singa utopiana.
OSS dia torolàlana hamolavolana rindrambaiko amin'ny fomba malalaka, io ihany no teraka ho valin'ny "fameperana" an'ny GPL.
Jereo ny Revolisiona OS ary atsaharo ny firesahana amin'ny kentoty taloha, feno fampahalalana tsara ny net.
Fahazoan-dàlana nankatoavin'ny Open Source Initiative, satria mahafeno ny fepetra efa voalaza izy ireo. Anisan'izany ny GPL 2 sy 3. Ergo, ny GNU GPL dia fahazoan-dàlana Open Source ihany koa
Araka ny nasongadin'i @diazepan, ny GPL dia fahazoan-dàlana iray izay ao anatin'ny fianakaviana "Open Source". Noho izany dia mitoetra ny grafika rehefa milaza fa voarara ny fampiasana ara-barotra, satria tafiditra ao anatin'ny OSI ny fahazoan-dàlan'ny rindrambaiko malalaka, mahafeno ny fepetra takiny izy ireo. Ary koa ny sary masina dia mivoaka araka izay itiavany azy, tsy misy mason-tsivana, manampy soratra manao ratsy toy ny "tsy azo antoka", "indraindray ihany" ary "voafetra". Absurdity misy tanjona mazava: mamela ny teny hoe "Open Source" eo anelanelan'ny rindrambaiko malalaka sy tompona (zavatra tsy mety tanteraka).
Azonao atao ny miresaka momba ny loharano misokatra na rindrambaiko maimaimpoana, saingy tsy azonao atao ny manasaraka ireo lisansa amin'ny harona roa (ny iray ho an'ny FSF ary ny iray ho an'ny OSI) satria misy ny sasany tafiditra ao amin'izy roa ireo.
Ny andininy farany dia mamitaka. Mba hanazavana, ny teny "sasany" dia tokony hovana "saika ny rehetra". Ny FSF dia mitanisa lisansa marobe ho rindrambaiko maimaim-poana saingy manolotra soso-kevitra vitsivitsy fotsiny (izany no nametrahako ny "sasany" nefa tsy tsapako). Misy ihany koa ny fahazoan-dàlana eken'ny OSI ary nolavin'ny FSF (toy ny Fifanarahana N Source Open Source) fa tranga tsy fahita firy ireo.
Lahatsoratra tsara. Ilaina hatrany ny manazava ireo karazan-javatra ireo mba hampihenana ny fikorontanana, indrindra eo amin'ireo mpampiasa vaovao. Ary eny, maimaimpoana ny rindrambaiko Open Source, fahasamihafana kely vitsivitsy monja amin'izay eken'ny FSF.
Tsara ny hanazavanao azy, antenaiko fa ny lahatsoratrao dia mifarana amin'ny maro amin'ireo adihevitra tsy mitombina izay natao tao amin'ireo forum sy bilaogy maro. Miarahaba anao ary tsara lahatsoratra.
1) Ny fandrarana ny fampiasana ara-barotra ny loharano misokatra dia latsa-bato tanteraka, noho ny fepetra 1. »
Hahaha, pipa inona !!! xD
Izany no ho _Fanaparan-kevitrao alohan'ny hampahafantarana anao tsara 😀
Ny F / LOSS dia tsy nandrara velively ny hamidy, raha ny tena izy * dia mamporisika * azy io hahazo tombony amin'ny fanajana ireo andininy ao amin'ny lisansa tsirairay avy.
Ahhhh -sento-…. : facepalm:
Ianao no manome ahy ny antony. Nilaza aho fa tsy azo atao ny mandrara ny fampiasana ara-barotra. Sa tsy fantatrao izay atao hoe baolina?
inona ny baolina?
Bolazo: Goof off, tsy misy dikany. (Fehezan-teny momba ny ony)
Baolina = lainga
Bolazo = Lainga be dia be.
Tsy haiko raha ampiasaina any amin'ny firenen-kafa izy io, fa any Espana dia takatra izany. 🙂
Eny fa misavoritaka kokoa ihany, any Arzantina dia hadalana tsy misy dikany ary any Espana dia lainga no dikan'izany? amin'ny faran'ny iza amin'ireo famaritana roa ireo?
Samy nibolisatra izy roa.
Toa hitako fa tokony hametaka doka maro kokoa ianao, satria, farafaharatsiny ao amin'ny taniko, tsy fantatray ny adjectif bolazo, tadidio fa ity bilaogy ity dia be mpamaky eran'i Amerika Latina sy ny sisa.
Ny hadisoako. Izany no fomba isehoanay Uruguayans / Arzantina.
Hanohy hanohy ny fanavahana ny vondrom-piarahamonina Open Source / Free Software ve isika? Ombe, tsia! Amin'izao fotoana izao dia misy kinova an'ilay rindrambaiko maimaimpoana maimaimpoana kokoa noho ilay ho afaka. Avy eo ny ratsy dia ho ratsy fanahy ary ny "afaka afaka" no ny tsara. Toy ny karazana mozika ve isika? Ahoana raha Black Metal, Metalcore, Popcore ... jereo, compadres, METAL ary fe-potoana. Raha sanatria ka ho voatarika amin'izay lazain'izy ireo momba rindrambaiko maimaimpoana aho fa tsy maimaimpoana ary izany teôria izany dia aleoko miaina eto amin'ny firenena tsy misy fitaovana elektronika afaka ho afaka tanteraka.
Hahaha, genius !! xD
Tehaka, mety somary misafotofoto ihany ny olan'ny fahazoan-dàlana ary tsara hatrany ny manazava ny fifandraisana misy eo amin'ny Open source vs Soft Libre, izay araka ny filazanao fa "ideolojika" na "filozofika". Ny teboka izay tsy mazava amiko dia ny an'ny andininy faha-4 BSD satria tsy azoko ny teboka 8 an'ny OSD "Ny lisansa dia tsy tokony ho voafaritra manokana amin'ny vokatra iray." Inona no dikan'izany? Ary inona no ifandraisany amin'izany: "ny iray amin'ireo fehezan-dalàna ireo dia mametraka ny doka ho an'ny fikambanana nanoratra ny kaody" an'ny BSD? Ataovy mazava amiko ny hevitra. Salama.
Ny Criterion 8 dia milaza fa ny zon'ireo rindrambaiko manana fahazoan-dàlana dia tsy tokony miankina amin'ny zava-misy fa ny programa dia ampahany amin'ny rindrambaiko manokana. Ny fanaovana dokambarotra an'io rindrambaiko manokana na ilay orinasa manamboatra azy io dia manitsakitsaka izany fepetra izany. Ohatra ao amin'ny fehezan-teny BSD 4, hoy ny andalana faha-3:
3. Ireo fitaovana fanaovana dokam-barotra rehetra manonona fiasa na fampiasana an'ity rindranasa ity dia tsy maintsy mampiseho izao fanekena izao: Ahitana rindrambaiko novolavolain'ny University of California, Berkeley sy ny mpamatsy vola azy ity vokatra ity.
Ka ho toy ny "by" fahazoan-dàlana iraisana mpamorona?
Misaotra tamin'ny fanazavana, olana lehibe io, maneso hatrany ireo tsy mamaky ny Windows EULA, mila manomboka ao an-trano ianao 🙂
Hafahafa tokoa, takatro fa ny mason-tsivana satria tsy hoe «maimaimpoana ity modely ity raha mbola ampiasaina miaraka aminy ary ao anatin'ity rindrambaiko rehetra ity».
Misy ampahany ve izay mamaritra ny dikany isaky ny teboka ary voafitaka ireo ambiguities ireo?
Araka ny nolazaiko tao amin'ny forum, manome ahy ny fahatsapana fa nivadika ity kisary ity 😀
Misy mahalala ve ny antony tsy mifanaraka amin'ny GPL ny Lisansa CDDL, fa eken'ny FSF ho toy ny lisansa maimaimpoana izany.
Miorina amin'ny lisansa Mozilla 1.1 ny CDDL. Tsy mifanaraka amin'ny GPL io kinova io. Ao amin'ity rohy ity dia misy fanazavana ny tsy fitoviana eo amin'ny MPL 1.1 sy ny GPL 3
Rehefa mieritreritra ny FSF fa malemy copyleft ny lisansa dia heverina ho tsy mifanaraka amin'ny GPL izany.
Tsy voatery. Ny BSD 2 sy 3-andininy dia mifanaraka amin'ny GPL, ary tsy copyleft.
Amin'ny alàlan'ny copyleft malemy dia tiako holazaina fa copyleft tsy dia voafaritra tsara izy io, fa mametraka fameperana mifanohitra amin'ny fanahin'ny GPL na mifanohitra amin'ny andininy ao aminy amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny copyleft an'ny rindrambaiko izay ahitana ny roa.
lahatsoratra tsara dia tsara, nahalala ny fetran'ireo fahazoan-dàlana ireo ... .. fa tsy dia xD misaotra betsaka!
gfretes dia hoy izy:
Che, saingy ny GPL dia manakana ny fampiasana kaody na inona na inona tanjona. Amin'ny ankapobeny, manakana anao tsy hanao lozisialy fananana miaraka aminy izy io.
Noho izany dia manohy mampiditra lesoka amin'ny tabilao izahay.
PS: tsara any, mampahafantatra ireo teny ampiasaintsika avy amin'ny Water Plate. Efa nataonay malaza ilay "groso ianao, fantaro" ... andao hitady bebe kokoa 😛
Mamaly an'i gfretes
Toa amiko fa io dia manondro ny fampiasana ny lozisialy (ataon'ny mpampiasa) amin'ny tanjona rehetra, fa tsy ny Fehezan-dalàna (ataon'ny mpampandahatra) na inona na inona tanjona. Ankoatr'izay, ny "fahalalahana" izay mamarana ny fahalalahana hafa rehetra dia tsy mitombina.
Ny WTF PL dia nadika hoe "Public Licence Ataovy izay hirainao amin'ny baolina." 🙂
Angel Samaniego Pineda dia hoy izy:
Androany aho dia hanolotra lahateny iray ary toa tena solontena ny sarinao, mitanisa ny fitenenana hoe "ny sary iray dia misy teny mihoatra ny 1000", marihina fa hampiasaina amin'ny tanjona fanabeazana izy io, miaraka amin'ireo mpianatra avy amin'ny University of Panama, ao anatin'ny rafitry ny foara fanaovana rindrambaiko maimaimpoana, apetrako koa ny rohy mankamin'ny bilaoginao mba hampirisihana azy ireo hitsidika ny bilaoginao, ary hampitombo ny mpanaraka liana amin'ny fampiasana rindrambaiko maimaimpoana, averiko ihany ny arahaba sy fisaorana,
Profesora Angel Samaniego Pineda
Valiny tamin'i Angel Samaniego Pineda